Ahoana ny fomba hanampiana valiny mandeha ho azy ao amin'ny WhatsApp | Androidsis
WhatsApp Io no fampiharana be mpampiasa indrindra amin'ny telefaona ankehitriny mba hifandraisana amin'ny fianakaviantsika sy ny namantsika. Imbetsaka izany dia tsy azo atao valio ireo hafatra nalefa rehetra amin'ny alàlan'ny fifandraisanay, fa misy ny safidy hafa afaka mamaly azy ireo amin'ny fomba mandeha ho azy.
Ny mety hisian'ny ampio valiny mandeha ho azy ao amin'ny WhatsApp Amin'ny alàlan'ny fampiharana ofisialy dia tsy azo atao izany, saingy misy ny fampiharana izay manampy antsika amin'izany. Androany isika dia hiresaka roa malaza sy misy maimaim-poana ao amin'ny Google Play Store mandritra ny fotoana fohy.
Hanampy antsika izy io na dia manana telefaona miasa aza isika, azo ovaina imbetsaka araka izay tadiavintsika ity hafatra ity ary hiasa amin'ny fifandraisana rehetra izany. Ny WhatsAuto, ohatra, dia mamela anao hisafidy olona iza no handray ny valiny mandeha ho azy, manampy ny fifandraisana amin'ireo lisitra.
1.1 Mamorona valiny mandeha ho azy amin'ny WhatsAuto
2 AutoResponder ho an'ny WA
2.1 Mamorona valiny mandeha ho azy amin'ny AutoResponder ho an'ny WA
WhatsAuto dia rindranasa misy safidy maro raha te hamorona valiny mandeha ho azy hampiasaina amin'ny WhatsApp ianao. Ho fanampin'izany, ity fampiharana ity dia miasa ihany koa amin'ny Telegram, izay mahatonga azy ho be mpampiasa na eo aza ny anarana nofidian'ny developer ary ampy ny misafidy izay fitaovana hampiasana azy, WhatsApp na Telegram.
Misy lahasa lehibe ao amin'ny WhatsAuto, ny valiny manokana. Azonao atao ny manamboatra ny valiny mandeha ho azy rehefa mahazo lahatsoratra manokana, koa rehefa mandray hafatra misy teny sasany, izay mahatonga azy io ho fampiharana manan-danja ambonin'ireo ambiny.
Ao amin'ny valiny manokana dia azonao atao ny misafidy ny lalao mifanandrify na ny Contains, izay mahatonga azy io ho azo namboarina tanteraka ary mamaly amin'ny fepetra iray. WhatsAuto dia fampiharana mihoatra ny atolotra raha mampiasa WhatsApp ho mpampiasa mahazatra ianao na raha matihanina.
Mamorona valiny mandeha ho azy amin'ny WhatsAuto
Vantany vao apetrakao io, safidy telo no hiseho eo an-tampony, amin'ity tranga ity dia safidio ny "Home" hamoronana valiny mandeha ho azy. Ampandehano ny safidy "Valiny mandeha ho azy ON", raha vantany vao mampihetsika azy ny fampiharana dia ahafahanao mamorona valiny natokana ho azy fa azonao atao koa ny mampiasa ireo lahatsoratra misy anao default.
Raha vao manoratra ianao na tonga Raha hisafidy ny lahatsoratra dia mankanesa any amin'ny fizarana "Contacts" mifidy izay olona handray ny lahatsoratra hanoratra hafatra aminao. Raha vantany vao nifidy ny fifandraisana ianao dia hifarana ny dingana ary ny lisitry anao dia handray hafatra eo noho eo, mety raha sanatria ka miala sasatra ianao, tsy eo mandritra ny fotoana fohy na raha miasa ianao amin'izany fotoana izany.
WhatsAuto - fampiharana valiny mandeha ho azy
AutoResponder ho an'ny WA
La Fampiharana AutoResponder ho an'ny WA Safidy hafa ny mamorona hafatra ary mandefa izany amin'ny fifandraisana rehetra izay mandefa karazana hafatra amin'ny finday. Ho an'ity dia ilaina ny manome fidirana amin'ireo fampandrenesana mba hanombohana miasa raha vao tonga ny hafatra voalohany.
Ny kinova maimaimpoana ho an'ny AutoResponder ho an'ny WA dia ahafahanao manampy valiny mandeha ho azy tsotra be ho an'ny hafatra manokana avy amin'ny fifandraisana na ho azy rehetra. Ny fanamboarana dia fototra ary mora ho an'ny karazana mpampiasa tsy manam-pahalalana.
Mamorona valiny mandeha ho azy amin'ny AutoResponder ho an'ny WA
Raha te-hamaly ny hafatra rehetra dia tsindrio "All", efa ao anaty boaty milaza hoe "Mamaly hafatra" soraty ny lahatsoratra nandefasana azy rehefa tonga ny hafatra tao amin'ny WhatsApp anay. Izy io koa dia manana fitsipika raha toa ka tianao ny manadio ny valiny amin'ny fifandraisana sasany, miaraka amin'ny "Match match" na "Mifanaraka amin'ny fitoviana".
Amin'ity tranga ity dia azo alamina sy mitovy amin'ny WhatsAuto izy roa, samy maimaim-poana sy misy ao amin'ny Google Play Store. Ireo hafatra dia azo ovaina koa araka izay tadiavinao ary alefa amina fifandraisana na amin'ny lisitry ny fifandraisana aminao.
AutoResponder ho an'ny WhatsApp
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanampiana valiny mandeha ho azy ao amin'ny WhatsApp
Navoaka tamin'ny 20 Aogositra ny Galaxy Note 2 sy Galaxy Fold 5